गोंगबुको गेष्ट हाउसमा यस्तो अवस्थामा भेटिए यी पुरूष, के भन्छ प्रहरी ? — Sanchar Kendra
गोंगबुको गेष्ट हाउसमा यस्तो अवस्थामा भेटिए यी पुरूष, के भन्छ प्रहरी ?
काठमाडाैं । काठमाडौंको गोंगबुस्थित एक गेष्ट हाउसमा एक पुरूषको शव फेला परेको छ।
शनिबार राति पौने १० बजे गोंगबुको मित्रनगरमा रहेको गोदावरी सन्तोषी गेष्ट हाउसमा एक पुरूषको शव फेला परेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ।
मृतक स्याङ्जा घर भइ नवलपरासी बस्दै आएका नारायण घर्ती क्षेत्री हुन्। उनको शव पोष्टमर्टमको लागि महाराजगञ्जस्थित टिचिङ अस्पतालमा लगिएको प्रहरी उपरीक्षक रमेश बस्नेतले जानकारी दिए।
शनिबार उनले गेष्ट हाउसको २०४ नम्बरको कोठामा राजु क्षेत्रीको नाममा इन्ट्री गरेका थिए। मृतकका परिवार काठमाडौं आउँदै गरेको महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जले जनाएको छ। प्रहरीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
उता मोरङको विराटनगर महानगरपालिका–८ मा बाबुछोराबीचको विवादमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । छोरासँगको झगडामा बलुवाइ गाउँका ५४ वर्षीय विको सहनी मुखियाको मृत्यु भएको हो ।
प्रहरीका अनुसार शनिबार राति बुबा छोराबीचको विवादका क्रममा माइलो छोरा रविले धकेल्दा मुखिया लडेका थिए, र उनको घाटीमा बासको भाटाले छेडेको थियो ।
गम्भीर घाइते भएका विकोको उपचारका क्रममा कोसी अस्पताल विराटनगरमा राति ११ बजेतिर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायव उपरीक्षक मानबहादुर राईले जानकारी दिए ।
घटनापछि २५ वर्षीय रवि फरार छन् । शनिबार राति नै फरार भएका रविको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । विकोका तीन छोरा र एक श्रीमती छन् ।
स्थानीय वासिन्दाका अनुसार मुखिया परिवारको झुप्रोमा मदिरा पसल थियो । राति अबेरसम्म पसल खोलेको भन्दै विको र छोरा रविबीच झगडा सुरु भएको थियो । त्यसै क्रममा रविले धकेल्दा घरको बार लगाएको बाँसको भाटा विकोको घाँटीमा उनिएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार विकोको जेठो छोरा लेटु सहनी बिरामी भएर घरमै सुतेका थिए । जेठो छोरालाई अस्पताल लैजान बोलाइएको एम्बुलेन्समै राखेर घाइते विकोलाई अस्पताल लगिएको थियो ।
प्रहरीले सोधपुछका लागि जेठा र कान्छा छोरालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । फरार रहेका माइला छोरा रविको खोजी भइरहेको प्रहरी नायव उपरीक्षक राईले जानकारी दिए ।